Ifilimu le-'Rock 'Em, Sock' Em Robots 'ku-Live With Vin Diesel
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ifilimu le-'Rock 'Em, Sock' Em Robots 'ku-Live With Vin Diesel
by UTrey Hilburn III April 20, 2021
ebhalwe ngu UTrey Hilburn III April 20, 2021
Nokho, Rock 'Em, Sock' Em Amarobhothi kwakukhula i-tabletop fave. Kwakungenye yaleyo midlalo, efana ne-Hungry, iHippos elambile lapho ushaya khona isihogo ngepulasitiki ethile eshibhile ukuze ngandlela thile ubuse abangani. Manje, Universal, Mattel futhi iVin Diesel ziletha itafula lasetafuleni elithandwa kakhulu kwifilimu yesenzo bukhoma.
Okwalabo abebehlala ngaphansi kwedwala, Rock 'Em, Sock' Em Amarobhothi kwakuwumdlalo owawufaka amarobhothi aluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu komunye nomunye ngokusebenzisa izilawuli ezithile ezingaqinile. Inhloso bekuwukushaya omunye umdlali endaweni efanele ukuze anqande ibhulokhi lakhe athole amaphuzu futhi ekugcineni anqobe.
UVin Diesel uzolingisa aphinde abuye akhiqize nenkampani yakhe i-One Race Films. nokuhlasela futhi Abakhwetha umbhali, uRyan Engle wabhala umdlalo wesikrini obona ubaba nendodana behlangana nomshini wempi, engicabanga ukuthi sizobona isibhakela eminye imishini yempi.
Uma ukhumbula eminyakeni embalwa edlule uHugh Jackman wayenefilimu ebizwa ngokuthi Steel Real lokho kuzwakala kufana kakhulu nalena. Kepha, kuzophola ukubona ukuthatha okusha nokuqagela ukuthi yini? Amarobhothi ashaya ishoba lamarobhothi kupholile.
“Ukuthatha okudala Rock 'Em Sock' Em Amarobhothi umdlalo, noMattel enguzakwethu, futhi ngiwumatanise nempumelelo yokwakha umhlaba, ukwenza amafranchise esibe nayo ne-Universal kujabulisa impela, ”kusho uVin Diesel ozophinde alingise.
Ngabe nina bantu nicabangani ngomqondo we Rock 'Em, Sock' Em Amarobhothi ifilimu yesenzo esibukhoma? Sazise esigabeni sokuphawula.
I-Deep Blood yi-ripy emihlathini ecekethekayo okufanele uyibone ngokuphelele. Bheka imininingwane lapha.
Isenzo EsipheleleI-Rock 'EmAmarobhothi aSock 'EmVin Diesel
I-trailer 'ye-Resort' yethula uhlobo olusha lwamakhaza lwendaba yezipoki
I-trailer 'Yokubulala Idrako' Isinikeza I-Horror Egcwalisa Inganekwane Enhle